Soosaarayaasha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Testosterone undecanoate - Warshadda
Badeecada Root Testone Nadiifinta qamriga, oo lagu iibiyo hoosteeda Noocyada Noocyada Nebido, Aveed, iyo Andriol iyo kuwa kale, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) oo loo isticmaalo inta badan daaweynta heerarka testosterone ee ragga. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta hoormoonka ee ragga gaduudan. Waxaa la qaadaa afka laba ilaa saddex jeer maalintiiba cunto ahaan ama lagu duro muruq goorta marxaladaha 12 kasta ama wax kale.
Qalabka tijaabada ah ee kaneecada ah (5949-44-0) video
Baaritaanka Root Testosterone Undecanoate (5949-44-0) Sharaxaad
Baaritaanka Root Testone Dufanka aan lakeenin waa qaabka loo yaqaan esterecerate testosterone, oo leh gonadotropin-secretory inhibashada iyo waxqabadka hoormoonka. Maadaama testosterone uu joojinayo qanjidhada gonadotropins ee qanjirka pituitary, maamulka testosterone wuxuu yareeyaa dheecaanka hormoonka luteining (LH). Iyada oo la xakameynayo dheecaanka LHH, koritaanka unugyada Leydig, oo caadi ahaan kiciya LH si loo soo saaro testosterone, waa la xakameyn karaa. Intaa waxa dheer, wakiilkan wuxuu kor u qaadayaa dayactirka sifooyinka lab ah ee ragga iyo waxa loo isticmaali karaa beddelka testosterone ee ragga labka ah.
Kiimikada tijaabada ah ee qashinka ah (5949-44-0) Smamnuucista
Product Name Baadhitaan aan qamriga lagaqaadin
Magaca Kiimikada Tijaabinta Root Testosterone Nadiifinta budada; 5949-44-0;
Baaritaan aan imtixaan lahayn
brand NAme Androgen; Steroid anabolic; Qalabka Androgen
Fasalka Daroogada Taariikhda lama heli karo
Molecular Wsideed 456.711 g / mol
barafku Psaliid 64-64ºC
milmi Biyaha Xisaab la'aan
Application Baaritaanka Root Testone Kaadi daadiinka ah waa qaabka qashin-qubka ee baaritaanka testosterone androgen
Waa maxay budada tijaabada ah ee tijaabada ah (5949-44-0)?
Baarista kiniiniga aan baaritaanka lahayn ee loo yaqaan 'ester-dose' waa daawada hormoon-ka ah ee testosterone oo leh astaan ​​khafiif ah oo ku jirta booska 17Beta. Waxaa loo heli karaa sida cirbadeynta durugsan iyo kumbuyuutarka afka, waxaana loogu talagalay daaweynta yaraanta testosterone. Waa in la ogaadaa in budada loo yaqaan 'testosterone undecanoate powdered' oo kaliya lagu tilmaamayo daaweynta xaaladaha shucaacda ee leh qaabdhismeedyo ama hidde-ahaaneed iyo in aan loo isticmaalin si loo maareyn waayo "jirro ku-xirnaanta da'da-da '.
Sida Loo Qaadi Karo Biyo-Dareemis (5949-44-0) shuqullada
Daawada kiniiniga aan baaritaanka lahayn ee loo yaqaan 'testosterone undecanoate' ayaa ah nuuc muddo dheer shaqeynaya, oo ah hormoon lab ah oo lab ah. Testosterone ayaa mas'uul ka ah koritaanka caadiga ah iyo horumarinta xubnaha galmada iyo astaamaha. Waxaa ka mid ah koritaanka iyo horumarinta xubnaha taranka ee guska, xiniinyaha, prostate, timaha jidhka, xajmiga codka, iyo murqaha iyo baruurta.
Qalabka tijaabada ah ee loo yaqaan 'Root Testoneone' (5949-44-0)
Dumarka ka weyn da'da 18 da'da: Qiyaasta lagu taliyey ee baaritaanka qalliinka testosterone waa 750 mg (3 ML) oo kaamil ah; oo ay ku xigto 750 mg (3 ML) ka dib markii 4 ka dib, ka dib 750 mg (3 ML) ayaa toddobaadyadii kasta 10 ka dib dhacaya.
Isticmaalka nabdoon ee wax ku oolka ah ee baaritaan la'aanta testosterone aan loo ogaan karin ragga da'doodu tahay 18 da'da.
Badeecada Bakeeriga Kiimikada ah (5949-44-0) Benifits
Daawada kiniiniga aan baaritaanka lahayn ayaa loo isticmaalaa ragga oo aan ku filneyn walxo dabiici ah oo loo yaqaan 'testosterone'. Testosterone waxay ka tirsan tahay daroogada daroogada oo loo yaqaan asrogens. Baarista kiniiniga aan baarista lahayn waxay ka caawisaa jidhka inuu hormariyo lana ilaaliyo astaamaha galmada (ragga), sida codka qotada dheer iyo timaha jidhka. Waxay kaloo ka caawisaa sidii loo ilaalin lahaa murqaha loona ilaalin lahaa lafaha, waana lagama maarmaan u ah awoodda galmada dabiiciga ah / rabitaanka.
Daawooyinka loo yaqaan 'testosterone undecanoate powder' ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa wiilasha qaangaarka ah si ay u keenaan qaangaadhnimada kuwa leh qaangaarka daahsoon.
Alaabtaan waa in aan loo isticmaalin dumarka.
Soo iibso tijaabi tijaabi laga bilaabo Buyaas.com
Budada Raashinka Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8)